Obianọ Akpọkuo Gọọmenti Etiti Ka Ọ Kwụọ Anambra Ụgwọ O Ji Ya
Aka na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Willie Obianọ kpọrọ oku a ọzọ oge ọ gara ileta ka ọrụ si aga n'okporo ụzọ Ezira–Ụm'ụọmakụ– Enugwu–Ụmụọnyịa–Achịna, bụ nke dị kilomita iri na abụọ.
O mere ka a mara na ụlọ ọrụ ji ya bụ ọrụ ngó ekwuola na ọ ga-arụchapụ ya bụ ụzọ tupuu isi ngwụcha ọnwa Jenụwarị ahọ na-abịa abịa, ma kwuo na ego agụ gọọmenti etiti ji ya n'ụgwọ ga-enye aka n'ụzọ pụtara ìhè n'ịrụchapụ ya bụ ọrụ, bụzị nke mere o ji akpọku ya ka ọ kwụọ steeti ahụ ya bụ ụgwọ ahụ.
O gosipụtara afọ ojuju ya banyere ogoogo e ji arụ ya bụ okporo ụzọ, bụ nke o kwuru na ọ ga-enye aka kwàlite ọnọdụ mmepe, ezi ọnọdụ obibi ndụ na ọnọdụ akụnụba obodo abụọ ahụ, ma kpọkùkwazie ụmụafọ obodo ahụ ka ha gaa n'ihu ịkwàdò ọchịchị nọ ugbu a na steeti ahụ na ọrụ ọma dị iche iche o ji n'aka.
Na ntụnye nke ha n'otu n'otu, onyeisi ụlọ ọrụ na-ahụ maka idozisị okporo ụzọ na steeti ahụ, bụ ụlọ 'Anambra Road Maintenance Agency', maazị Emeka Okoye na onye ji ya bụ ọrụ ngó, bụ maazị Sammy Mustapha kwuru na a wụọla ihe karịrị otu kilomita na ụma ise nke okporo ụzọ ahụ, waa ọwà mmiri rugoro kilomita abụọ na ụma ise n'akụkụ ya, tinyere ihe ndị ọzọ pụtara ihè a rụpụtagoro na ya bụ ụzọ. Ha mekwara ka a mara na dịka otu ihe si aga, na a na-elegara anya na a gà-arụchapụ ya bụ okporo ụzọ n'oge ahụ e kwuru.
N'okwu dịkwa ka ibe ya, otu nwa amadi selitere isi na mpaghara ebe ahụ, ma bụrụkwa onye jibụrụ ọkwa dịka osote aka na-achị steeti Anambra n'oge gara aga, bụ maazị Emeka Sibeudu bunyere gọvanọ Willie Obianọ ụkpa ekele maka mbọ pụtara ihè ọ na-agba n'ibuli steeti ahụ n'ezi ọnọdụ mmepe dị elu na-agbanyeghị ọnọdụ ihe isi ike akụnụba ala anyị nọ n'ime ya ugbu a; ma kpọkùkwazie ya ka o jide ka o ji, ọ bụnadị dịka o kwere nkwà ịkwàdò ya ka ọ gaa n'ihu na ha bụ ọrụ ọma o ji n'aka.